8 Muhiimadood Oo Cabista Biyo Badan - Daryeel Magazine
8 Muhiimadood Oo Cabista Biyo Badan
1. Biyaha waxay kordhiyaan tamarta oo ay yareeyaan daalka – Maadaama nudayaasha maskaxdu 70% biyo ka kooban yihiin haddii jirka biyuhu ku yaraadaan waxaa yimaada daal, fahmad-daro iyo tabardaro ka yimid maskaxda oo wayday biyo ku filan.
2. Is-caataysiinta – iyadoo la cabo galaas biyo ah ka hor inta aadan cuntada cunin waxay keentaa inaad cunto yar cunto si aadan si xun ugu cayilin.
3. Dhaqida jirka – Biyuhu jirka waxay ka caawiyaan inay mayraan nudayaasha oo bannaanka u saaraan sunta, kiimikooyinka iyo wasakhda ka samaysantay jirka dhexdiisa. Qashinsaar ahaan ayaan jirkeenu isaga saaraa kaadida iyo dhiddidka. Qofka aan biyo badan cabin wuxuu u nugulyahay in dhagax kalyaha uga samaysmo.
4. Daryeelka maqaarka jirka – Biyuhu waxay waraabiyaan, jilciyaan, nuuriyaan maqaarka. Waxaa la aaminsan yahay in biyuhu ka hortagaan duuduubka maqaarka- waa daawo ka hortagta muuqaalka gabowga maqaarka.
5.Caawinta dheefshiidka – Biyuhu waxay qaybwayn ka qaataan shiidida cuntada iyo ka hortaga callool-qalaylka(Constipation).
6. Xoojinta difaaca jirka – Qofka aadka u caba biyaha inta badan jiradu kuma soo degdegto maadaama dheecaanada difaaca jirka ee dabiiciga ahi u badan yihiin dareere biyo ah.
7. Daawaynta madax-xannuunka – madax-xannuunka, goon-jabiyaha iyo dhabar-xannuunkaba cabida biyahu way caawisaa inay dawayso maadaama dhamaan xannuunadaan ay imaan karaan marka fuuq-bax jiro.
8. Biyuhu waa nolosha barkeed – Dhiiggaaga 80% wuxuu ka kooban yahay biyo lama huraan ay tahay in laga sameeyo unnugyo cusub oo dhiig ah.
Qofka caadiga ah oo qaangaarka ah oo ku nool cimil;o dhexdhexaad ah wuxuu u baahan yahay inuu maalintii cabbo siddeed galaas oo biyo ama 2 ilaa 2.5 liitar oo biyo ah.
Hal Koob Oo Biyo Ah Waxay Kaa Badbaadinayaa 10 Dhibaato Caafimaadeed Nafaqada Iyo Caafimaadka Laga Helo Cabista Caanaha Geela Xikmado Xiiso Badan